Ministeera Hajaa Alaa: Ejansiin Diyaaspooraa Itoophiyaa hundeeffamuuf - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Hajaa Alaa: Ejansiin Diyaaspooraa Itoophiyaa hundeeffamuuf
Madda suuraa, MoFA
Eejansiin diyaaspooraa lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatanii fi kanneen gara biyyaatti deebii'aa jiran irratti xiyyeeffate hojjatu hundeessuuf hojiin eegalamuu dubbi himaan Ministeera haajaa alaa Obbo Mallas Alam har'a beeksiisaniiru.
Ejjansichis itti waamamuummaan isaa ministeera haajaa alaatiif ta'ee, hojiin isaas lammiilee Itoophiyaa biyya jiranitti waltaasiisuu, fayyadamummaan isaanii bayya jiranitti akka eegamu taasisuu akkasumas gumaachi biyyaaf taasisan akka guddatu hojiiwwan hojjachuu ta'uu Obbo Mallas himaniiru.
'Itoophiyaan lamummaa dachaa eeyyamuu qabdi'
Waajjirri teessoo isaa Itoophiyaa keessa taasifatu kunis kaayyoowwan isaa muummee keessaa mirgoonnii fi ulfinni namoomaa lammileen biyyoota garaa garaa keessa jiraatan kabajiisuudha jedheera. Hirmaannaa lammilee mirkanneessuun ammoo kaayyoo isaa kan biraati.
Hojiilee lammiilee biyyaa biyaa jiraatanii ilaallatan Waajjira ministeera Haajaa alaatti sadarkaa waajjira daarektaraatti hojatamaa kan turan ta'ulleen, hanqiinawwan haala ijaarasa kana dura turee fi dandeettii diyaasporaan misooma biyyaa keessaa keessatti gumaachu danda'u xiyyeeffannaa keessa galchuun, eejjansicha hundeessuuf murteefamu isaa dubbi himaan kun dubbataniiru.
Dhimmii lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatanii ''hojii dhimmoota biraa waliin walitti qabamee hojjatamu ta'u hinqabaatu'' jedhaniirus.
Waggoota 15 dura galiin doolaara 130 lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniin eergamee kan ture yoo ta'ee, haalli maallaqa kanaas amma biiliyoon shan qaqabuulleen, maallaqin hedduun kan ergamu karaa idilaawaa hintaaneen ta'unsaa rakkina cimaadha jedhaniiru.
Ibsa torbee waggaa dhumaa kanas mata duree ''Dhiifamaan haa ceenu, jaalalaan yaa eda'amnu, injifannoo dippilomaasii yaa galmeessinu'' jedhuun.
''Lammileenis walitti dhufeeni isaan misiyoonoota keenya waliin qabaachaa turan gaarii hinturre,'' kan jedhan Obbo Mallas, kanaafuu lakkoosfa lammiilee biyyaa laa jiraatanii dhaabbilee idil addunyaa adda addaa irraa tilmaamaan fudhachuuf dirqamu himan.
Wayita ammaattiis lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan gara miiliyoona sadiitti akka tilmaamaman himaniiru.
Diyaasporaan biyya isaatiif gumaacha taasisuuf ilaalchi siyaasaa ulaagaa ta'uu hinqabaatus jedhaniiru.
'Walitti dhufeenya mootummaa waliin qabnurratti garaagarummaa qabna'- Hooggana EZEMA
Falmii jajjaboo Awurooppaa, Liivarpuul moo Maadiriidtu irra aana?
Yuukireen magaalota ishee Bahaa keessaa bahuu hin ooltu-qondaala
Lakkoofsi ogeessota miidiyaa tibbana hidhamanii 18 gahuu himame
Qorannoon waa'ee qaamolee hin beekamnee 'UFO' deebii gahaa osoo hin argatiin hafe
Yeroo dhuma kan haaromfame: 26 Waxabajjii 2021
US Yukireenirra nageenya manneen barnootaarratti akka xiyyeeffattu Tiraamp dhaaman
Dhimmoonni dhala dhabuuf sababa ta'an maali fa'i?